Global Voices teny Malagasy » Rosia/Zeorzia: Ny Olana Amin’ny Famahanam-Bolongana Hahazoam-Bola · Global Voices teny Malagasy » Print
Rosia/Zeorzia: Ny Olana Amin'ny Famahanam-Bolongana Hahazoam-Bola
Voadika ny 09 Novambra 2011 4:30 GMT 1	 · Mpanoratra Dmitry Davidov Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Zeorzia, Fahalalahàna miteny, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Akon'ny RuNet
Lasa zavamisy eo amin'ny serasera Rosiana ny firoborobon'ny mpamaham-bolongana karamaina sy ny “serasera an-takonana” ary nisy aza ny fandaharana sasany  tao amin'ny televiziona Rosiana. Efa nanoratra momba ity lohahevitra ity  tamin'ny antsipiriany ny Global Voices tamin'ny herintaona – nefa niakatra dia niakatra ny sandany hatrmin'izany fotoana izany; Afa-mijery izany any amin'ny vohikala hafa ihany koa ny tsirairay (ohatra ato sy ato ).
Resedresaka vao nifanaovana haingana tao amin'ny bolongan'i Yuri Yakunin, mpanoratra sady mpamaham-bolongana ara-politika ao Zeorzia, no mampiseho ny fakam-panahy handray vola amin'ny ambaratonga isan-karazany. Nahaliana ny lahatsoratr'i Yakunin satria miresaka indrindra ny etika. Hita tao anatin'ny adihevitra fa azo ekena ho an'ny sasany ny mandray vola, ary asehony ihany koa hoe nahoana ny jerena ho toy ny fahadalana ny fandavana handray vola amin'ny fanoratana tantara iray.
“Adala ve aho?”
'Vola ambany totozy' tahirin-tsary sxc.hu
Tamin'ny 17 Oktobra 2011 i Yakunin no nanoratra  [ru] tao amin'ny bolongany:
Androany ry zareo nanolotra 300 dollar amerikana ahy hamoaka lahatsoratra iray – mila iray momba ny filohanareo [Zeorziana] sy ny minisitra ao aminy mbamin'ny haratsiany ry zareo.
Nanomboka tamin'ny alalan'ny Skype ny resaka raha nisy olona antsoina hoe “Sergey” milaza ny tenany ho iray amin'ny mpitantana sampan-draharahan'ny fifandraisan'i Moskoa no sady nanombam-barotra.
Namoaka ny pikan'efijerin’  [ru] ny karajia i Yakunin hanamarinany ny lazainy.
“Inona ny tombontsoanao amin'izany?” hoy i Yakunin nanontany sy niontana amin'izany tolotra mahamiramirana izany.
“Izany no anakaramana ahy”, hoy i Sergey nanazava. “Ary mihoatra ny 300 dollars.”
“Hay ve”, hoy i Yakuning niato.
“Satria tsy mahita mpamaham-bolongana any Zeorzia aho”, tahaka ny sorena i Sergey ary gaga ihany. “Manohana an'i Saakahsvili [filohan'i Zeorzia] daholo ny any.”
“Tsy hahita koa ianao. Tsy manohana an'i Saakashvili aho ary afa-manoratra zavatra betsaka saingy tsy hahazoam-bola kosa”, hoy i Yakunin namaly.
“Adala ve aho [nandà ny tolotra]?” hoy ny fanontanian'i Yakunin tamin'ny mpamakiny. Matetika izy no lasan'eritreritra tamin'ny fanapaha-keviny raha mijery ny tsy fananany vola(kely ny vola raisiny) sy ny fiavian'ny tsingerintaona nahaterahan'ny zanany lahy izay mitady fanomezana.
“Manorata lahatsoratra,” hoy  [ru] ny mpamaham-bolongana temur25 namany sady mpamaky azy.
“Rehefa tsy hanoratra ianao, misy hanoratra foana eo.” “Tsy mila vola angaha ianao?” hoy i tipo-graff nanontany  [ru].
“Manorata. Samy mahazo. Na ianao na ilay mpitantana. Ary i Saakashvilli, kosa, araka ny eritreritro tsy haninona amin'izany,” hoy  [ru] i Run-if-you-can.
Saingy nijoro tamin'ny heviny i Yakunin: “Mety hanoratra aho”, hoy i Yakunin namaly. “Saingy na diky iray sotro anaty iray barika-na tantely na tantely iray sotro anaty iray barika-na diky samy diky daholo izany. Tsy tiako ho maimbon'izany ny fianakaviako.”
“Fa angaha misy lainga ao anatin'ny lahatsoratra?” hoy i run-if-you-can nanohy. “raha ny fahazoako azy tsy tianao i Saakashvili sady tsy tianao ny politikan'ny antoko. Ka inona ny olana?”
“Tsy milaza lainga aho” hoy ny fanazavan'i Yakunin. “Mahita daholo isika fa mihoatra noho izay tadiavina ho amin'izany lahatsoratra izany na dia ny fanehoan-kevitra eto aza saingy tsy hanoratra ny MARINA hahazoana vola aho! Mety hanao dokambarotra aho [hahazoam-bola] saingy tsy amin'ny zava-masina.”
Tsara ny manamarika fa maro amin'ny mpisera LiveJournal no manohana ny fanapaha-kevitr'i Yakunin. Saingy ny zava-misy mahatonga azy – izay anisan'ny mpamaham-bolognana malaza any Zeorzia – mahatsapa ho tsy maintsy manazava ka mitodika amin'ny mpamakiny an-tserasera hanohana azy, dia mariky ny fatoriana tsirangaranga iainan'ny mpamaham-bolongana politika maro miaina ao an-tanindrazana.
Mampisy tolo-bola “mahaliana” ny Laza sy ny isan'ny mpamaky matetika (jereo indray ny lahatsoratra Global Voices  voalaza etsy ambony na ny resaka nosoratan'i russos ato  [ru]). Tsy dia mahagaga ny rehetra loatra intsony ny fifampiangan'olona roa ho voakarama tamina famoahana lahatsoratra eo amin'ny mpamaham-bolongana Rosiana. Fa mifanontany indray ny tsirairay hoe firy ny isan'ny olona tena mandray vola tsy milaza na inona na inona, na mandika tena ho tsy azo anaovana kolikoly. Manana anjara toerana lehibe ny olana ara-bola sy ny ezaka goavana natao hahazoana mpamaky ny bolongana an'arivony.
Tahaka izay hita amin'ny valinteny ao amin'ny lahatsoratr'i Yakunin, misy hatrany ireo vonona ny handray vola (“Rehefa tsy hanoratra ianao, misy hanoratra foana eo”). Saingy ny mampalahelo ny fisiana fomba fijery mifanohitra dia miteraka fifampiangana ho mpamaham-bolongana mpikarama. “Mieritreritra ry zareo fa raha manoratra zavatra hafa ankoatra izay lazain'ny hafa dia midika izany fa nisy nandoa vola taminao izay [tamin'ny lahatsoratra navoaka],” hoy i Yakunin nanoratra.
Na dia jerena ho sehatra fanehoana hevitra ampanginin'ny gazety mahazatra aza ny aterineto dia mora mivadika ho fitaovana politika ihany koa. Saingy felaka mandrivorivo azon'ny fahafaha-miteny ny mpamaham-bolongana mahazo vola hampiroborobo hafatra politika. Fironana mampidi-doza ihany koa izay mety hanala baraka ny kianjan-kevitra, mbola mitolona hatrany amin'ny lova navelan'ny fitondrana mpangeja nisesy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/11/09/25100/
 fandaharana sasany: https://globalvoicesonline.org/2010/01/19/russia-story-about-paid-bloggers-appears-on-tv/
 nanoratra momba ity lohahevitra ity: https://globalvoicesonline.org/2010/06/10/russia-networks-of-paid-bloggers-exposed/
 ato : http://www.publiciti.ru/en/news/6russian-bloggers-paid-to-publish-propaganda-blog-posts91